Tafika Thai Manasa Ankizy Hilalao Fitaovam-piadiana Tena izy, Fiara Mifono Vy ary Angidimby Fitondra Manafika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2017 7:41 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Swahili, বাংলা, Español, English
Andron'ny Ankizy tao amin'ny tobin'ny tafika an'habakabaka “Chiang Mai” ao Thailand. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons
Fety fankalaza isantaona ny Andron'ny Ankizy ao Thailand, ka ao anatin'izany no ikarakaràna hetsika maro isankarazany manerana ny firenena mba hanomezana aingam-panahy ho an'ireo andian-taranaka hoavy. Amin'io andro io, omena fahalalahana ny ankizy hitety maimaimpoana ireo tranombakoka, tranonbem-panjakana, ary hatramin'ny tobin'ny tafika feno fitaovam-piadiana.
Eny, marina izany, afaka milalao an'ireo fitaovam-piadiana tena izy ny ankizy Thai, mikitika ireo fitaovana vaventy, ary miakatra ambonin'ireo fiara mifono vy sy angidimby “Black Hawk”.
Ho an'ireo marobe mpiaro ny zon'ny ankizy, lasa fanomezana vàhana mampidi-doza ny fampiroboroboana ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina ity fomba izay toa zary lasa fanao tato anatin'ny taompolo vitsivitsy lasa ity. Ireo mpanakiana ny tafika izay naka an-keriny ny fahefàna tamin'ny 2014, dia mahita azy io ho toy ny hetsika iray fitaizàna ny saina, hetsika izay manampy hanamarina ny fifehezan'ny tafika ao amin'ny firenena, ary ny tafika rahateo izay zara raha manao izay tokony hatao mba hanovàna izay fomba fihevitra izay.
Hatramin'ny 1930, efa ampolony mahery ireo fanonganana fanjakàna nataon'ny tafika tao Thailand.
Tao anatin'ny gazety iray ao an-toerana, toy ity ny lohatenin'ny tatitra iray “Fihantsim-basy (gâchette) Falifaly: Mandray An-Tanana ireo Fiara Mifono Vy, Fiaramanidina, Basy ireo ankizy Thai amin'ny Andron'ny Ankizy”, miaramila iray miaraka aminà zazakely iray dimy taona nandritry ny fankalazana tamin'ity taona ity no nanamarina ny fampiasàna ireo tena fitaovan'ny tafika :
Ny hifankahazaran'ireo ankizy amin'ny miaramila sy ny fitaovam-piadiana no ataonay. Amin'ny fampifaneraseràna azy ireo, mianatra ny mitia ny miaramila ry zareo ary hatramin'ny faniriana hanao miaramila aza.
Ankizy iray mandray ny TAR-21, basy Israeliana fitondra manafika, nandritry ny Andron'ny Ankizy tao amin'ny Andiany Faha2 Mpiambina ny Mpanjaka ao Bangkok
Ho an'ilay mpanao gazety, Andrew MacGregor Marshall, “andro natokan'ny fanjakàna ho fanohanana ny fanararaotana ny ankizy ny Andron'ny Ankizy amin'izao fotoana izao ao Thailand .
Ny singa fototra amin'ny Andron'ny Ankizy dia ny tafika — izay tsy niaina velively ny tena ady nifanandrinana taminà vahiny fahavalo, fa namotika tsy nitsahatra ny demokrasia Thai — izay manasa ny ankizy ho any anaty toby hahafahan-dry zareo manasa atidoha azy ireny amin'ny fanomezana azy fitaovampiadiana mahafaty ho lalaoviny.
Nifampizaràn'ireo mpisera anaty aterineto ny fomba fijeriny, mpisera izay tsy mankasitraka ny fampiasàna ny fitaovam-piadiana ho entina manabe ny ankizy.
Androm-pirenena Ho an'ny Ankizy ao Thailand
Mandritry ny Andron'ny Ankizy, iangaviana tsy hitondra ankizy handray fitaovam-piadiana fitondra miady
Hatramin'ny taona lasa, nanao fanentanana totoafo marobe ny tafika nikendrena ny ankizy, toy ny fanovàna ny zotra arahana any an-tsekoly ho fampahafantarana ny soatoavina Thai, fandraisana mpitilin'ny habaka mba hanao asan'ny polisy amin'ny aterineto, ary fikarakaràna lasy fanazarantena ho an'ireo ankizy any amin'ny garabola.
Faritan‘i John Draper mpanoratra ho toy ny endrika ‘fandetehana sesimontotra an-tsaina tsy mitsahatra’ ny fanofanana tohanan'ny tafika any amin'ireo akaninjaza.
Sarotra ny haminavina hoe mandra-pahoviana no haharetan'izay fandetehana sesimontotra izay. Raha tafaverina ny fitondrana sivily ao Thailand, hanohy ihany koa ny fampilalaovana fitaovam-piadiana mavesatra sy fiara mifono vy ny ankizy ve ny governemanta vaovao?